देशव्यापी अन्तर वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैतमा | Hamro Khelkud
देशव्यापी अन्तर वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैतमा
मंगलबार, फागुन ४, २०७७
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – आगमी चैतमा देशव्यापी अन्तर वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ । स्पिन इभेन्टरस प्रा. लि को आयोजनामा चैत ७ देखि लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा देशव्यापी अन्तर वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुरु हुने भएको छ ।
अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको प्रतियोगितालाई प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक स्पिन इभेन्टरस प्रा. लि र मुख्य प्रायोजक भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मुख्य प्रायोजक भ्यालीले ९ लाख ७५ हजार प्रदान गर्ने छ । सह प्रायोजकमा पूर्ण शकर श्रेष्ठ, सम्झना ल्याचोरेटोरी क्लिनिक प्रा.लि, रवाबुरत्न कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि रहने छन् ।
प्रतियोगितामा देशभरका वडाहरुबाट एक हजार भन्दाबढी खेलाडी सहभागी हुने आयोजक जनाएको छ । प्रतियोगितामा पुरुष टिम, महिला टिम, पुरुष एकल, महिला र पुरष एकल, भेट्रान सिंगल्स (४० वर्षमाथि) र पुरुष भेट्रान्स एकल (५५ वर्षमाथि) गरेर ६ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने छ । वर्तमान वरियताका शीर्ष १६ मा रहेका नेपाली टेबल टेनिस खेलाडीले भने प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
प्रतियोगिताको अनुमानित कुल बजेट १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुरुष र महिला सिंगल्समा प्रथम हुनेले ३० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् । दोस्रो हुनेले १५ हजार र तेस्रो हुनेले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै भेट्रान्स एकलतर्फ प्रथम हुनेले १० हजार, दोस्रो हुनेले ५ हजार र तेस्रोले २५ सय नगद पुरुस्कार पाउने छन् । पदक तालिका अनुसार शीर्ष स्थान हासिल गर्न सफल वडाले नगद रु पँचास हजार रुपैयाँ र प्राप्त गर्ने छन् ।
प्रतियोगिता सरकारले लागु गरेको नागरिक स्वास्थ्य मापदण्डमा रहेर आयोजना हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । लामो समयदेखि कोभिड-१९ महामारीले खेलकुद गतिविधि सुस्त रहेको स्थितिमा खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले यो प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ ।